Cabdi weli Maxamed qanyare oo ku Guuleestay Doorashada Aqalka Hoose +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cabdi weli Maxamed qanyare oo ku Guuleestay Doorashada Aqalka Hoose +Sawirro
Doorashadii xubnaha aqalka hoose ee Galmudug aya saaka dib uga bilaabatay degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud taasoo maalmahan hakad ku jirtay.
Doorashadii ugu horeysay ee saaka ka dhacday degmada Cadaado ayaa waxaa ku soo baxay C/wali Maxamed Qanyare oo horey uga tirsanaa baarlamankii uu xiligiisu dhamaaday ee Somalia kaasoo mar labaad fursad loo siiyey inuu ka mid noqdo baarlamaanka cusub.
C/wali Qanyare ayaa 48 cod kaga guuleystay Bashiir Maxamed Caddow ooa ahaa musharaxii la tartamayey kaasoo helay labo cod, iyadoo hal codna uu xumaaday sida wararku nagu soo gaarayaan, waxaana hadda socota doorashada xubnaha kale ee aqalka hoose, iyadoo maanta dhowr kursi loo tartami doono.
Waxaa aad loo adkeeyey saaka amaanka goobta doorashadu ka dhaceyso ee magaalada Cadaado, waxaana halkaas buux dhaafiyey ergooyinka beelaha iyo musharaxiin ku tartamaya codadkooda.
Dhinaca kale, Magaalada Baydhabo wararka naga soo gaaraya ayaa iyana waxay sheegayaan in doorashada aqalka hoose ee halkaas ka socota ay ku soo baxeen Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dowlada Somalia Cali Shiikh Maxamed iyo siyaasiga Saalim Caliyow Ibrow.